घुम्तिहरूमा भेटिँदा/छुटिँदा: Poem
Posted by subas at 8:19 PM Links to this post
मलाई जप्नु छैन
कन्ठ गर्नु छैन
रुढ राष्ट्रिय गानको
हरेक शब्द र वर्णहरू
वा देशद्रोही ?
पसिनाले गल्दै गर्दा माटोका डल्लाहरू
मलाई अत्यधिक सन्तोष हुन्छ
फैलिँदै गर्दा आकाश छोएर माटोको सुगन्ध
म हर्षविभोर हुन्छु
सिरानीमा राष्ट्रिय झन्डा
हरदिन राष्ट्रिय सपना सुनाउन
राष्ट्रवादको परिभाषा घोक्न
आफ्नो भूगोलका मान्छेहरूको स्वप्नील अनुहार
अङ्कुरण भइदिन्छ प्रेमको बीज
कहीँदेखि भरिएर आउँछ
शक्तिको अनौठो स्वरुप
बेसुरा बर्बराउँदै हिँड्न देशको नाम
केही गर्नु छैन
मलाई यो देश
प्राणजत्तिकै प्रिय छ ।
Posted by subas at 8:15 PM Links to this post
र उसैगरी किन आउँदैन
उनीहरुलाई १०४ को ज्वरो ?
जब हेर्छु बाबाको अनुहार
चिम्सा आँखाहरुले लुकाउन
उनको प्याओ दम
खोकिलामा उसैगरी च्याप्दै बसेकी छिन्
जहिल्यै बेरिएर बसेको छ
अभावको विशालु गोमन
कहीँ सन्तोष दिन्छ कि
अनौठो खोजमा छन्
उडेको यो धूलो
हावाले कुन सहर बोक्दै लैजान्छ ?
जीवन मक्किँदै झर्न लागेपछि
यसको जीर्णोद्धार हुन्छ कि हुन्न
कुनै एक कुनामा बसेर
र यसैले दिएको छ
जुन कुनै सरकारले मेरो
घरको आँगनमा ल्याएको
निकै शक्तिशाली छ
सधैँ किन यही गाउँको बाटो
कहिले ज्वरो बोकेर ल्याउँछ
र फ्याँकी हिँड्छ
कहिले पखाला थाहै नदिई पानीको
मुहानहरुमा छरी हिँड्छ ?
वा उसलाई थाहा छ
यहाँ मान्छेहरु बाँच्न हरेकक्षण
कि उसलाई आउँदैन कहिल्यै
१०४ को ज्वरो ।
Posted by subas at 9:52 AM Links to this post
भत्किनु ,भत्किनु र भत्किरहनु
तर अस्वभाविक छ
भत्किनु , भत्किनु र भत्किरहनु
प्रश्न जाहेज छ
भत्काइरहनु मात्र ठीक हो भने
निर्माण किन आवश्यक छ ?
भत्केका तस्विर छापिरहेका छन्
भत्किनु ठीक वा बेठीक बहस चलाइरहेछ
भत्किनुकै पक्ष, विपक्षमा
विचार विमर्श गरिरहेछन्
कोरिरहेछ भविष्य भत्किरहेको
फोटो पत्रकार सबभन्दा बिकाउ
फोटो खिच्ने धुनमा छ –भत्काइकै
फरक फरक भत्काइका
कुन भत्काइ ठीक
भत्काइकै आग्रहहरू छन्
हो सबैसबै अलापिरहेछन्
ससाना साम्प्रदायिक धुनहरू
हो भत्किनुनै ठीक हो भने
बन्नु किन आवश्यक थियो ?
हो चर्किनु नै सुन्दरता हो भने
कुरुपता के को अर्थ हो ?
यो अहिलेको युग
यो अहिलेको समय
टुक्रिरहेको छ क्षणक्षण
तर एउटा घर
पूर्ण निर्माणले राम्रो देखिन्छ
न कि एकएक इँट्टा इँट्टामा ।
Posted by subas at 2:40 AM Links to this post
Posted by subas at 11:32 PM Links to this post
“जब म भत्किन्छु र
आस्तित्विक काँचका पर्दाहरूमा
सर्वसुन्दर भएझैँ लाग्दै जान्छ
मेरो सर्वप्रिय पात्र म
मेरो सर्वाधिक सत्य पनि म
मेरो आदिम मौनता
सर्वशक्तिशाली मेरो आवाज हो ”
यो पातलो अँध्यारोमा
कोही कविता पढिरहेछ
मपट्टि बहँदै आएको बतासले
कविताका यी पङ्क्तिहरू सुनाएर गएको छ
मेरा चेतनाका तहहरू अपूर्ण–अपूर्ण लाग्दैछन्
मेरो आस्तित्विक स्वरूप विनिर्मित हुन खोजिरहेछ
म प्रकाशझैँ दौडिन सक्दिन
यो कविताको वेग समात्न
म रोकिएर धैर्य गरिरहन पनि नसक्ने भएको छु
फुत्किएका कविताका पङ्क्तिहरू भुल्दै
यो आवाज आफैँमा सङ्गीतमय छ
यो आवाज आफैँमा लययुक्त छ
कुनै भयङ्कर उचाइदेखि
वा आफ्नै गतिमा आइरहने
वा कुनै परिभाषाविहीन
वा सबै परिभाषायुक्त
यो आवाज विचित्र –विचित्र छ
यो आवाज अद्भूत –अद्भूत् छ
कुनै ईश्वरसम्मत हुनुपर्छ
वा समयसम्मत हुनुपर्छ
वा प्रकृतिसम्मत हुनुपर्छ
मेरो चेतनाको मध्येदेशमा
विस्तारै झङ्क्रित् यो स्वर
साँझको कुनै परिचित पदचापजस्तो लागिरहेछ
एउटा पुरातात्विक दूव्र्यसन–राजनीति
यहाँका प्रत्येक मान्छेका अनुहारमा
यदी हुन्छ भने
तिम्रो आवाजको मसिनो सिर्कनाले
हिर्काइदेऊ यी मान्छेहरूलाई
अनि बिउँझिऊन् यिनीहरू होसमा
उनीहरूको आदिम बेहासीबाट
तिनीहरूले आफू निकै पछि परेको
अनुभव गर्नेछन् ।
Posted by subas at 8:45 AM Links to this post
आवाज र पहिलो प्रेम
एउटा चहकिलो घाम
तिम्रो आवाजको क्षितिजनिर
हो, त्यहीँ म जन्मिएँ
यो आवाज मौनजस्तो नै छ
यो आवाज शून्यजस्तो नै छ
मैले नै यो बुझेँ कि
आवाजहीन अर्को आवाज
तिम्रो नै थियो
र आवाजहीन अर्को आवाज
मैले पनि फर्काएँ
वा हावाले उडाउँदै ल्याएको
कागजको कुनै चिर्कट्टोझैँ
जब समयले उडाउँदै ल्याएर
यो क्षण तिम्रो मेरो पहिलो प्रेम थियो
तिम्रो अबोध आँखाहरूमा
सम्मोहनको कुनै क्लेश थिएन
र प्रेमको पहिलो चुम्बन
यी आँखाहरू बीच भए
तिमि थियौ ,म थिएँ
यो पहिलो अर्थात् अन्तिम प्रेम
प्रेम अर्थात् प्रेमहरूको प्रेम
यो आवाज हृदयको
भित्री तहहरूदेखि प्रेमकै बाटो भएर
प्रेमसम्म पुग्न खोजिरहेछ
प्रेमदेखि छुट्टिएर फेरि प्रेममै पुगिरहन्छ
प्रेमदेखि शुरु भएर फेरि प्रेममै पुगिरहन्छ
प्रेमजस्तो लाग्दैन र फेरि प्रेम नै हो
मलाई तिमी मौन बसेको मनपर्छ
मलाई तिम्रो अर्धगोलार्ध ओठहरूको
समाधिस्थ समागम मन पर्छ
अर्थात् मौन आवाज
तिम्रो आत्ममृत्युमा मभन्दा शोकाकुल
अरू कोही हुने छैन
मेरो प्रेमको ब्युँझाइमा म देख्ने गर्छु
अधिकपय जीवनका कलेवरहरू
मेरो प्रेमको अवशेषमात्र हो
म प्रेमका काँडाहरूले
बिझेका प्रेमका काँडाहरू निकाल्छु
अनुपस्थित आवाजको कुनै अर्थ छ
तिमी अर्थात् मेरो आवाज
जोविना म शून्य छु
तिमी अर्थात् मेरो हृदय
जोविना म असम्भव छु
तिमी हरेकपल्ट प्रेमको पहिलो
पत्रहरू मात्र पठाइरहन्छौ
र यी पत्रहरू म पागलजस्तो पढिरहन्छु
हो,स्वस्थानीको कुनै एकभाग कथा पढिरहेझैँ
म पढ्दै छु यो रातरातभर
म पढ्दै छु यो दिनदिनभर
तिम्रो मेरो प्रेमको यो मौनमौन कथा
बिटल्स गायक जोन लेननको
कुनै सुमधुर सङ्गीतजस्तो
म सुन्दै छु यो रातरातभर
म सुन्दै छु यो दिनदिनभर
तिम्रो मेरो प्रेमको यो मौनमौन आवाज ।
Posted by subas at 10:28 AM Links to this post
हेनिङ मेनकलले जुन कुरा भने त्यसले मेरो साह्रै चित्त बुझाइदिएको छ । यी व्यक्ति हुन् –स्विडिस उपन्यासकार । यिनले भनिदिए –“तिनओटा किताब पढ ,तीसजना मानिससँग सङ्गत गर किनभने मानिसजस्तो गहिरो किताब अरू केही हुँदैन ” । यही प्रमुख आवश्यकता छ कि समाज र साहित्यबीच जुन स्पेस छ ,त्यो मेटाउनु । साहित्य यस्तो हुनुपर्छ ,त्यस्तो हुनुपर्छ ;त्यो पनि होइन । तर यो कहीँ न कहीँ र कसो न कसो गरी मान्छेहरूले हिँड्ने बाटो भएरै अघि बढ्ने गर्छ । अहिलेको साहित्यको मुल र अजस्र स्रोत मान्छेभन्दा बाहिर पक्कै छैन ।
मान्छेहरू सँगको सङ्गत –यो निकै कठिनसिद्ध कुरा हो । लाग्नसक्छ यो निकै झिनो र सामान्य विषय हो । तर कवि ,लेखकहरू सबभन्दा बढी यहीँ चुक्ने गरेका छन् । यिनीहरू मान्छेसँगको सङ्गतलाई भन्दा लेखकीय ढर्रालाई बढी महत्व दिन्छन् । नेपालका सुप्रसिद्ध कवि भूपि शेरचनलाई “तपाईँलाई कवि लेखकहरूसँगको संसर्ग कस्तो लाग्छ ?” भनी सोद्धा उनले समेत एउटा इन्टरभ्यूमा भनेका छन् –“घिनलाग्दो”। हुन त नेपालको समग्र परिवेश ,यहाँका कवि लेखकहरूको ढोङी मानसिकताबाट प्रताडित उनले त्यसो बोल्नु उनको अर्थमा ठीक थियो होला । तर त्यसो भन्दैमा उनी त्यो घेराभन्दा बाहिर उम्किन सम्भव पनि त थिएन ।
विस्तारै लेखन मान्छेतिर हुँदै स्वकेन्द्रित छ । यसो भनूँ स्वको परिकेन्द्रबाट नै यो संरचित हुँदै यही मान्छेकै परिवृत्तमा प्रमुखत ः घुमिरहेको छ । यसैले यो मान्छेको भीडहरूबाट आफूसम्म आइपुग्न मान्छेसँगको हेलमेल अपरिहार्य छ । जब मान्छेले अरूलार्इृ चिन्दैन ,उसले आफूलाई चिन्न पनि असम्भव छ । साहित्य अन्तर्चेतनासँग सम्बद्ध छ । यो अन्तर्चेतना प्राप्ति त्यसै सम्भव छैन । बाह्य संरचनाहरूको विस्तृत र खोजपूर्ण अध्ययनले अन्तर्चेतना प्राप्य हुन सम्भव होला सायद् । नेपाली साहित्य खोजदेखि निकै पर असङ्गत बाँचिरहेछ । मूलत ः स्तुतिगान र स्वगानले यसलाई थला बसाएको छ ।
हामी पचासौँ किताबहरू अध्ययन गर्छौँ । सयौँ किताबहरूको व्याख्या गर्न तम्तयार हुन्छौँ तर ती किताबका कुनै पानामा लेखिएको कुनै एक हार विषयलाई जीवनको कुनै मोडमा प्रयोगपरक र व्यवहारपरक ढङ्गबाट लैजान सक्दैनौँ । अनि यसरी साहित्यले कुन दिन जीवन पाउँछ ? साहित्यभन्दा निकैमाथि मान्छे छ । जब मान्छे सप्रिन्छ तब साहित्य त्यसै सप्रिँदै आउँछ । मान्छे र साहित्यलाई जब फरक ढङ्गबाट हेर्ने गरिन्छ र जबसम्म यिनीहरूलाई विपरीत ध्रुवजस्तो बनाइन्छ ,ओहो त्यहीँ त लेखिन्छ नकाम साहित्य । त्यहाँ पुरस्कारहरू हुन्छन् ,त्यहाँ साहित्यिक सङ्घ र सङ्गठनहरू हुन्छन् ,त्यहाँ साहित्य लेखिने विषयहरू प्रशस्तै हुन्छन् तर साहित्य हुँदैन ।
Posted by subas at 9:15 AM Links to this post
अनमोल संचेतनाको स्वरूप –अनमोल दृष्टान्त
लक्ष्मण भण्डारी एक सचेत रूपमा अध्यात्मिक सोच राख्ने व्यक्ति हुन् । उनले सङ्कलन र सम्पादन गरी नैतिक आचारगत विषयका केही सुरूचिपूर्ण कथाहरूको सङ्ग्रह बजारमा ल्याएका छन् । आजको नेपाली पुस्तक बजार पनि बिस्तारै जटिल र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ । त्यो भिडमा यिनी पनि कसिलोसँग उभिने प्रयत्नमा छन् । उनको यो कदम प्रशंशनीय रहेको छ । उनी यी कथाहरूलाई नामकरण गर्छन् –अनमोल दृष्टान्त ।
कथाहरू छोटा र मीठा अनुभूत हुन्छन् । कथाका पछाडि आफ्ना भावनात्मक अनुभूतिहरू यिनले थपेका छन् । यसले सम्पूर्ण कथाको सार बोल्छ । आजको समय निकै दुर्बोध्य छ । यसलाई बुझ्नुको असमर्थताकै प्रतिरूप मात्रै हामी बाँचिरहेछौँ । यो समयलाई डो¥याउने आदर्शहरू कहीँकतै विलुप भैरहेछन् । यही आदर्शको खोजीमा छन् लक्ष्मण भण्डारी । यिनी लेखनमा जति सरल लाग्छन् ,व्यवहारमा उस्तै प्रतीत हुन्छ । मूलत :यिनको यो सङग्रह आफ्नो निजी कथाहरूको सङ्ग्रह हैन । तर पनि यिनले सङ्ग्रहमा कहीँ न कहीँ आपूmलाई र आफ्नो क्षमतालाई चिनाएका छन् । यो नै उनको सफलतम पक्ष हो ।
लक्ष्मण भण्डारीहरू किताब निकाल्छन् । यो पुस्तकाकार स्वरूपमा बजारमा आउँछ । तर यो बजार पुस्तकका आवरणहरूको चर्चा गर्छ । पुस्तकका पेजहरूको गुणस्तरीयताको चर्चा गर्छ । यसभित्रको गुदीको गुणवत्ताको कुरा गर्दैन । यद्यपी आवरण र पेजहरू कुरुप हुनुपर्छ भन्नेतर्फ यो पङ्क्तिकार लक्ष्यित हुन खोजिरहेको पक्कै होइन । लक्ष्मण भण्डारीको सम्पादनमा निस्किएको यो पुस्तकमा गुदीका कुराहरू त छन् नै ,साथै जीवनका मूल्य र मान्यताका प्रश्नहरूलाई पनि यिनले बहुत प्रासङ्गिक बनाएका छन् ।
विज्ञानमा सबै सिद्धान्तहरूको एकिकृत स्वरूप निर्माणको प्रयास थालनी निकै अघिदेखि हुँदै आएको छ । यसमा पछिल्लो समयमा लागि परिरहेकामध्ये महान वैज्ञानिक हकिन्स पनि छन् । यसले संसारमा रहेका शक्तिहरू केही न केही रूपमा एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् र शक्तिको मुलस्वरूप एक नै छ भन्ने तर्फ सङ्केत गर्छ । यसबाट कहीँ न कहीँ अन्तिम सत्य रूप भगवान मान्ने परिकल्पनासँग मेल खान खोज्दोरहेछ भन्ने यो पङ्क्तिकारलाई लाग्ने गर्छ । तर विज्ञानको अनुपस्थितिको अवस्थामा मानिसहरूलाई निश्चित सीमाहरूमा निर्देशित गर्न धार्मिक चिन्तनहरूले निकै महत्वपूर्ण योगदान खेलेको हुनुपर्छ । र अध्यात्म पनि एउटा निकै रहस्यमयी विज्ञानकै स्वरूप हो । अनमोल दृष्टान्तका कथाहरू पनि अध्यात्मिक र धार्मिक खालकै रहेका छन् ।
यो कथासङ्ग्रहका कथाहरू छोटो समयमा पढेर सकिने ,मुड फ्रेस गराउने खालका छन् । एक बसाइमा कथा सङ्ग्रह पढेर सकिने खालको छ । एक सय एक वटा कथाहरूको यो सङ्ग्रह कफी गफमा बस्दा ,पढाउन लाग्दा ,समाजिक नैतिकता र मूल्यमान्यताका प्रसङ्गहरू कोट्याउँदा कामलाग्ने नीतिगत उदाहरणहरूको अनुशीलन हो । आजका मान्छेहरू ( ब्ल्याक हार्ट विथ ह्वाइट कोट ) लाई नीतिका कुराहरू कति पच्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ तर यिनी यो भीडमा सचेत उभिने प्रयत्नमा छन् । लक्ष्मण भण्डारी अध्यापन क्षेत्रमा संलग्न छन् । सिनर्जी एफएममा धार्मिक कार्यक्रम चलाउँछन् । यसले मात्र उनलाई यो खालका कथाहरूको सम्पादन गर्न पक्कै प्रेरित गरेको छैन । यो उनमा रहेको धर्मबोध र नीतिबोधको प्रष्ट प्रमाण हो ।
यी कथाहरू कथाहरू मात्र पनि छैनन् । यसमा विश्वचर्चित व्यक्तित्वहरूको जीवनसम्बद्ध प्रेरक प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन् । इन्दिरा गान्धि ,विवेकानन्द ,सिगमन्ड फ्रायड ,जवहरलाल नेहरू ,बुद्ध , विन्स्टन चर्चिल , जोन एफ केनेडी ,अब्राहम लिङ्कन लगायत धेरै व्यक्तिप्रसङ्ग साथै वीरबल र अकबरमा आधारित ज्ञानबर्धक र प्रेरणादायी रोचक प्रस्तुती पाइन्छ ।
चर्चिल र भीड
विन्स्टन चर्चिल एकपटक ठूलो सभामा विशेष व्याख्यान दिनका लागि तयारी गर्दै थिए । जम्मा भएको मान्छेको ठूलो भीडतिर इसारा गर्दै उनका एक प्रशंसक ले भने “चर्चिलज्यू ! तपार्इँ यति लोकप्रिय हुनुहुन्छ कि तपाईको व्याख्यान सुन्न यहाँ हजारौँ मान्छे भेला भएका छन् ।”चर्चिलले शान्त स्वरमा भने “प्रिय मित्र ! यी मान्छे भाषण सुन्न होइन तमासा हेर्न यहाँ भेला भएका हुन् । यदि भोलि मलाई फाँसीमा चढाउने घोषणा गरियो भने पनि यहाँ यो भन्दा धेरै हजार मान्छेको भीड जम्मा हुनसक्छ ।”
मान्छे भीडका पछिभन्दा आप्mनो विचार र लक्ष्यप्रति केन्द्रित हुनसके जीवनमा सफल हुनसकिन्छ ।
यही स्वरूपका विचारसहितका लेखनीहरू उनले सङ्ग्रहमा सङ्कलन तथा सम्पादन गरेका छन् । यो उनको सङ्ग्रह प्रकाशनका दृष्टिले प्रथम रहेपनि सफल सम्पादन तथा प्रकाशन रहेको छ । यस किताबको अध्ययन गर्नुले केही न केही मात्रामा सही जीवन सञ्चालनका निम्ति कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्नुजस्तै ठहर्छ । केही मात्रामा भाषागत त्रुटी ,केही कथाहरू हल्काफुल्का अनुभव हुनु वा चुट्किलाजस्तो अनुभव हुनु र कतिपय प्रसङ्गहरू पूर्णतया निर्जीव कल्पना मात्र हुनु र प्रचुर आदर्शमा केन्द्रित रहनु यो किताबको कमजोरी हो भन्ने लाग्छ । संसारमा एब्सोल्युट भन्ने कुनै सत्य नै छैन र निरपेक्ष जीवन सम्भव पनि छैन ।
लक्ष्मण भण्डारी , सङ्कलक र सम्पादक मात्र होइनन्, एउटा लेखक पनि हुन् । उनी कविता र निबन्ध कर्ममा पनि लाग्ने गर्दछन् । यसभन्दा पछि पनि उनको सम्पादकीय र लेखकीय गुणलाई हामीले मन पराइरहन पाउनेछौँ ,यही आशा गरौँ ।
Posted by subas at 10:00 AM Links to this post
कहीँ त यस्तो पनि होस् न
मान्छेहरूले चिन्न सकून
कालो ,सेतो ,खैरो,पहेँलो
रतन्धोको कुनै बिमारीले गर्ने
खै कुन गन्तव्य हिँडिरहेछ यो देश ?
अखबारका पेजहरूको कापकापबाट फैलिरहेको
कुनै नमिठो अनिश्चयको गन्धले
हरदिन तर्सिँदै आँखा खोल्छ –बिहान
र मेरो सपना मरूभूमिकरण हँुदै गएको
कुनै बाँझो जमिनजस्तो लाग्दै जान्छ
यस युगको सचेत बुद्धिजीवी
फुटपाथमा बसेर बेच्छ सहिदको तस्वीर
र आजकाल मासुपसलमा
सँगै बिक्री हुन्छ
कुनै जीर्ण देवलको पछाडिपट्टि
चोर ढोकाबाट आवतजावत गर्ने
विना लाइसेन्सको ईश्वरलाई के मतलब
मान्छेहरू भने मस्ताराम भजन गाइरहेछ
न्दिनभर ,रातभर ,जीवनभर
जीवनगतिको उल्टो दिशामा
कहिलेदेखि चल्न थाल्यो घण्टाघरको सुई
र कहिलेदेखि बग्दैछन् यी नदीहरू उल्टो
यो बहने हावाको किन कुनै दिशा छैन ?
र समयको अर्थ कसरी जस्तोपनि लाग्दैछ ?
यो भूगोलको अन्तिम सिमानाहरूमा
उदाइरहेका अनगिन्ति इन्द्रेणी
अस्ताउँदै गरेको सुर्यले
पश्चिमी क्षितिजमा छोडेर गएको उज्यालोका मसिना धर्काहरू
वा मन्दिरमा चढाइएका फूलहरूको सुन्दरता
यसबाट बन्दैन र कुनै मल्हम
जुन जस्तो कि सबै घाउहरूमा लाउन मिलोस्
फुत्किँदै भागेको पानीको मुल
हो जीवनसँग यही अर्थहरू भेटिरहेछु म
मान्छेहरूको अनुहारमा सधैँ बसाइँ आउन्
र फैलिरहोस् सुवास जिन्दगीको
छतिवन –८ ,पावस ,मकवानपुर
Posted by subas at 7:50 PM No comments: Links to this post
Posted by subas at 8:57 PM Links to this post
क्यानभासमा दुःखको रङ भर्दै म
आँखामा पदचिन्ह छाडेर हिँडेका सपनाहरू
सुदूर कतै अल्झिरहेका होलान्
मेरो बेचैनले बिथोलिएका
मेरो छट्पटाइले आत्तिएका
मेरो अनिद्राले सताइएका
ओझलिएको हुनुपर्छ–मेरा आँखाहरूदेखि
म निदाउने यो सडक,यो पेटीमा, यो चौरमा,
“यदि मृत्युपछि पनि जीवन सम्भव छ भने
म सपनाको जीवन माग्न चाहान्छु”
हिँडेर नसकिएको यो इतिहासको बाटो
खै ! परिवर्तन नै भएन
भोगेर नसकिएका विगतका दूर्दिनहरू
खै ! फेरिँदै फेरिएनन्
भविष्य अँध्यारो सुरूङतिर डोरिइरहेछ
तैपनि, बाध्य भएर
त्यतैतिर निर्देशित छु म
खडेरिग्रस्त यी आँखाहरू सपनाका
मलाई एकातिर र संसार अर्कोतिर
एकातिर,क्यानभासमा दुःखको रङ
भर्दै छु म
उल्काहरू खसिरहेछन्–प्रत्येक पल
र क्षतविक्षत छन्–सारा मान्छेका आस्थाहरू ।
Posted by subas at 12:41 PM Links to this post